သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ ဒိုင်ယာရီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ ဒိုင်ယာရီ
Posted by အဇဋာ on Jun 25, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 14 comments
ဟာ အဲဒီမှာသွားပါလေရော။ ကျွန်တော့်ဖိနပ်ကို NHK သတင်းဌာနက ငနဲ တက်နင်းလိုက်တာ ပြတ်သွားရော။ ဂရုမစိုက်လိုက်နိုင်ဘူး။ လက်က ရေးနေရသေးတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အထဲကနေပြော။ အပြင်မှာက သတင်းထောက်တွေက ချွေးတလုံးလုံးနဲ့လိုက်ရေးနဲ့။ သူမလည်းပြောပြီးရော ကျွန်တော့်မှာ ခြေတုံးလုံးနဲ့။
ကြားမှာ ပြဿနာတစ်ခုတက်လိုက်သေးတယ်။ ကုမုဒြာက မမတစ်ယောက်နဲ့၊ 7Day က မမတစ်ယောက်က သူတို့ကို တွန်းပါတယ်ဆိုပြီး ဒေါပွနေလို့ မနည်းချော့လိုက်ရသေးတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ တက္ကစီငှားဖို့ပိုက်ဆံကလည်းမပါ။ ရုံးမှာ ပြန်ထုတ်ရင်လည်း အက်ဒမင်ဆိုတာတွေနဲ့ စကားပြောရမှာမို့ ရွှေဂုံတိုင်မှတ်တိုင်ကို ခြေလျင်ပဲ လျှောက်သွားလိုက်တော့တယ်။
ကိုမြတ်ကျော်သူရေ…ဒီနေ့ ချိန်မှာ ၊ စိစစ်ရေးမတင်ရတော့ဘူး ဆိုတာ ဟုတ်သလားဗျ
ဒါပေမယ့်…MJN(Myanmar Journalist Network), MJA(Association), MJU(Union) တို့က ဦးစီးပြီးတော့ Media Law ကို လုပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ Media Law ထဲကအတိုင်း (စိစစ်ရေးအစား) Council တစ်ခုဖွဲ့ပြီး ထုတ်တင်သတင်းတွေကို တည်းဖြတ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော် သတင်းထောက်စဖြစ်တော့ စိစစ်ရေးဆိုတာ တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သတ္တဝါကြီးတစ်ကောင်ပါ…ခုခါမှာတော့…
ကိုမြတ်ကျော်သူရဲ့ပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီး…ကျမစိတ်တောင်မကောင်းဘူး.. ၀ါသနာအရင်းခံနဲ့မို့လို့သာ ဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖြစ်နေတာထင်တယ်နော်…လေးစားပါတယ်..
သံတွဲသား သတင်းထောက်ကြီးရေ—–ဒီလိုနဲ့ ဘဲဖြတ်ကျော်ရအုံးမပေါ့။
ဒါပေမယ့် မီဒီယာသမားတို့ မည်သည် ဘက်မျှအောင်ရေးနိုင်၊ပြောနိုင်၊
ဆိုနိုင်မှသာ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ပီသပေလိမ့်မည်။
အားပေးနေတယ်ဗျို့ ။ ကျွန်တော်တို့က ကြုံရာလေးတွေရေးနေချိန်မှာ အမှန်တစ်ကယ် ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို သိချင်နေပါသည်။
သတင်းထောက်ဆိုတော့ ဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်းနဲ့များ အပြင်မှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆုံဖူးမလား မသိဘူး။
ဆုံဖူးရင် အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးကို ဆက်ဆက်လေး ရေးစေချင်ပါတယ်။
ကျမက ဆရာကြီးရဲ့ ပရိတ်သတ်ပါ။ စိတ်ဓာတ်ရော ခံယူချက်ရော နေပုံထိုင်ပုံရော အင်မတန်လေးစားပါတယ်။ တခါလောက်တော့ ဆရာကြီးဆီ စာရေးမယ်ဆိုပြီး တေးထားတာမှာ ဆုံးသွားတဲ့အထိ မရေးဖြစ်လိုက်ပါဘူး။
အခုလို အတွေ့အကြုံလေးတွေလည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဆက်ပါအုန်း။
ကျွန်မအားအကျဆုံးနဲ့ စိတ်အ၀င်စားဆုံးကတော့ သတင်ထောက်ပါပဲ။ တကယ့်သတင်းထောက်စစ်စစ် ဆိုတာ သတင်းတခုကို ရေဆုံးရေဖျားလိုက်ကြတာကိုလဲသဘောကျတယ်။ အခုဒီမှာ တချို့ဂျာနယ်တိုက်က သတင်းထောက်ပေါက်စတချို့ကိုမေးကြည့်တယ်။ နင်တို့သတင်းဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့ များသောအားဖြင့် ဖုန်းနဲ့ပဲယူလိုက်တယ်တဲ့။ သတင်းအစအနဘယ်လိုနားထောင်လဲလို့ထပ်မေးတော့ တိုက်က ပြောတဲ့သတင်း ကို ဖုန်းဆက်လိုက်တာပဲတဲ့။ အဲလိုသတင်းထောက်မျိုးတော့ကျွန်မစိတ်ပျက်မိတာအမှန်ပါပဲ။ ကိုမြတ်ကျော် သူ ရေးတဲ့ထဲမှာ သတင်းထောက်ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေပါနေတယ်။ စိတ်ဝင်စား စရာပါ ပဲ။ နောက်ထပ် အတွေ့အကြုံလေးတွေလဲစောင့်မျှော်နေပါတယ်။ ထပ်ရေးပါအုံး။
သတင်းထောက်တွေရဲ့ အခက်ခဲနဲ့ .. သတင်းလိုက်ရတာ … အချိန်ဒေသမရွေးပုံတွေ ၊ အခက်ခဲတွေ ၊ ဂျာနယ်တိုက်နဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ … ၊ ပရက်ရှာပေးခံရတဲ့ ကိစ္စတွေ … စတာတွေအကြောင်း … စုံပလုံစိနေအောင် …. ကြားဖူးနားဝရှိနေခဲ့ပါတယ် … ။
ဂျာနယ်တိုက်ဘက်က .. သတင်းထောက်တွေကို … သတင်းဦးရဖို့သာ အတင်းလွှတ်နေကြတာ … ပံ့ပိုးမှုပိုင်းကျတော့ အားနည်းတယ်လေ … ။ လုံခြုံမှုပေးတဲ့အပိုင်းကျတော့လည်း မပြောချင်တော့ပါဘူးလေ … ။ ဟိုတစ်ခါ … ဂိုထောင်ပေါက်ကွဲတဲ့ ကိစ္စလိုမျိုး… အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ေ နရာတွေမှာတောင် အနီးဆုံးထိပြေးပြီး … သတင်းဓါတ်ပုံယူရတာမျိုး ၊ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တဲ့ နယ်စပ်ဘကက် နေရာတွေအထိ သတင်းလိုက်ယူပေးရတာမျိုး … ဒါတွေ လုပ်ပေးတာတောင် … မသိတတ်တဲ့ အယ်ဒီတာတွေ ၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ် အယ်ဒီတာတွေရှိတယ် … ။
လုပ်ငန်းတွင်း ဆက်ဆံရေး တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်လာမှာစိုးလို့ …. ဖွင့်မပြောပဲ ငြိမ်နေတော့ လူတွေကိုနှပ်ခိုင်းလို့ ရတယ်တွေးချင်တွေးနေမှာပေါ့ …. ။ သတင်းထောက်တိုင်း အရည်ချင်းမပြည့်ဝကြဘူး ..ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စိတ်မထားနိုင်ကြဘူး ဒါကို လက်ခံပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ..ယူလာတဲ့ သတင်းရဲ့ .. အတိမ်နက်ပေါ် မူတည်ပြီး ၊ သတင်းထောက်ဘက်က ပေးဆပ်ရတာတွေ အများကြီးပါပဲ … ။ ဒါကို ဂျာနယ်တိုက်ကို သိစေချင်ပါတယ် … ထိုင်ရာက မထပဲ .. ဖုန်းဆက်ညွှန်ကြားနေတဲ့ …. အယ်ဒီတာကြီးများကိုလည်း သိစေချင်ပါတယ် … ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ ရှေ့တန်းတင်ပြီး .. သတင်းဦး ၊ သတင်းထူးဖြစ်ပေမယ့်လည်း .. ပထမဆုံးမျက်နှာဖုံးမှာ ဖော်ပြခွင့်မပေးပဲ .. နောက်ဘက်တွေ ပို့လိုပို့ … ဟိုတပိုင်းဒီတပိုင်း လုပ်လို လုပ်တွေတာ … ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ ခံစားမှုတွေကို ဦးစားပေးတာ ဂျာနယ်ရဲ့ နစ်နာမှုလို့ပဲ မြင်မိပါတယ် … ။ ဦးနှောက်မရှိတဲ့ လူတစ်ချို့ ရာထူးကြီးနေရာနဲ့ အရေးပါတဲ့ နေရာတွေရောက်နေလျှင် .. အဲ့လုပ်ငန်း တိုးတက်သင့်သလောက် တိုးတက်မှာ မဟုတ်ဘူး ။
သတင်းထောက်တစ်ဦးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ ဆိုတာထက် သတင်းထောက်တစ်ဦးရဲ့ ဘ၀ လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်…
ကိုမြတ်ကျော်သူရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဆက်ပြီး သိချင်ပါသေးတယ်…
အခုလို အတွေ့အကြုံလေးတွေ ရေးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ရေးပါအုန်း။
အဲဒါကြောင့် ကိုမြတ်ကျော်သူရဲ့ စာတွေ စဖတ်ကတည်းက ထင်မိပါတယ်။
အခုလို ပရိုသမားတွေ ရောက်လာတာ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူစရာပေ့ါ။
အင်းးးးးးးးး ရွာထဲမှာတော့ သဂျီးက စီဂျေကဒ် ထုတ်ပေးဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ကာ..
စီဂျေဖြစ်ချင်သူတွေ ဖိနပ်ခိုင်ခိုင် ၀ယ်စီးမှရမယ်လို့
အဲဒီလို အဖြစ်တွေကို မြင်ထားလို့ သတင်းကို မထောက်တထောက် လုပ်လို့ မရဘူးလားလို့ သဂျီးကို ကြိုမေးထားတာ။
ဒါ့ထက် ရီကော်ဒင်းမလုပ်ပဲ သတင်းကို လက်နဲ့ အမှီလိုက်ရေးလို့ရသလား။
လက်ရေးက အဲဒီလောက် မြန်နိုင်လား။
သတင်းကျန်ခဲ့တာတွေ၊ စကားကျခဲ့တာတွေ ဖြစ်နေရင် ပြဿနာက သေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
နောက်ပြီး လူတွေ တွန်းနေ တိုးနေတဲ့ ကြားထဲမှာ ရေးရတာဆိုတော့….
>> pooch >>
ကျွန်တော် ဆရာလူထုစိန်ဝင်းနဲ့ ဆုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဆရာမဆုံးခင် ၅ လအလိုလောက်ကပါ။ ဒါပေမယ့် ဆရာနဲ့ ကျွန်တော် တွေ့ရတဲ့အကြောင်းက ပွဲတစ်ပွဲမှာ ဖြစ်နေတာမို့ ရေးစရာ အကြောင်းအရာ အများကြီးမရှိပါခင်ဗျ။ နောက်ပြီးတော့ ဆရာလူထုစိန်ဝင်းအကြောင်းက ရေးနေတဲ့သူတွေ အများကြီးဆိုတော့….
>> etone >>
အစ်မရေ။ အစ်မပြောတာတွေက တကယ်ဖြစ်နေတာတွေ များပါတယ်ဗျာ။ အဲဒီအကြောင်းတွေကိုသာ စာဖွဲ့ရရင် နှစ်ထောင့်နှစ်ည တောင် ပြီးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။။
TNA ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာက ကျွန်တော်တို့သတင်းထောက်လောကမှာ တကယ်ဖြစ်နေတဲ့၊ နောက်ပြီး မလွှဲသာ၊ မရှောင်သာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဘဝပါ။